लाचार म कि मेरो सरकार ! - Jhapa Online
विचार • शीर्ष खबर • स्थानीय खबर
लाचार म कि मेरो सरकार !
म बिर्तामोड बस्न थालेको करिब १३ वर्ष भयो । २०६४ सालमा बिर्तामोडको अन्धुवा खोला छेउमा रहेको तहल्का दैनिक पत्रिकाबाट मेरो बिर्तामोड बसाइँ सुरु भएको हो । भद्रपुरबाट कामको खोजीमा त्यस बेलामा बिर्तामोड आएको थिएँ । तहल्का दैनिक बन्द भएपछि म प्रतिदिन दैनिकमा आएँ । त्यसमा आबद्ध भएपछि मेरो बिर्तामोड बसाइँ अहिलेसम्म रहेको छ । तर, अहिले भने म प्रतिदिनमा छुइनँ । यस्ता कुरा किन गरेको होला भन्ने जिज्ञासा यो पंक्तिहरु पढिरहेका जोकोहीलाई हुन सक्छ ।
यो गन्थन गर्नुको एउटै कारण हो । घर बहाल कर । १३ वर्षमा मैले पहिलो पटक मैले बुधबार घर बहाल कर तिरेँ, बिर्तामोड नगरपालिकामा । तर, मैले बिर्तामोड बसेर टन्न कमाएर, घरजग्गा जोडर र भाडामा लगाएर कमाएर तिरेको भने होइन । म अहिले पनि बिर्तामोडमा भाडा तिरेर बस्छु । मैले जाने–बुझे अनुसार घर बहाल कर घर भाडामा लगाएर वापत आएको रकमबाट तिरिने कर हो । त्यसको सोझो सम्बन्ध घरधनीसँग हुन्छ । सरकारले पनि कर घर धनीसँगै लिने हो । तर, यहाँ त सिस्टम उल्टो रहेछ । भाडा घर मालिकले लिने र कर पनि उल्टै भाडामा बस्नेहरुबाटै असुल्ने । यो कुरा मैले धेरै अघि पनि सुनेको थिएँ । सुनेको र भोगेको कुराको स्वाद भिन्दाभिन्दै हुँदोरहेछ ।
बिर्तामोड नगरपालिकाले नगर क्षेत्रमा केन्द्रीय कार्यालय रहेका सञ्चारमाध्यमहरुलाई सूचीकरणका लागि आह्वान गरेको छ । प्रथम पटक प्रकाशित मिति साउन २८ गतेदेखि १० दिन अर्थात् भदौ ६ गतेसम्म म्याद छ । आफू पनि त्यसमै आबद्ध भएकाले व्यवसाय दर्ता नवीकरणका लागि बुधबार बिर्तामोड नगरपालिका गएको थिएँ । व्यवसाय दर्ता नवीकरण गर्ने फाँटमा जाँदा फाँटका कर्मचारीले घर बहाल कर चुक्ता गरेको रसिद बिना व्यवसाय दर्ता नवीकरण नहुने बताए । पर्यो फसाद ! सोझो मान्छेको सोझो तर्क । घर बहाल कर त घर धनीले तिर्ने होइन र ? भन्ने सोझो तर्क त्यहाँ फेल खायो । हुन त नियम संगत त्यही हो तर…
व्यवसाय नवीकरण गर्नुपर्ने बाध्यता छ किनकि म्याद सकिन लागेको छ । कोरोनाका महामारीमा एउटै कामका लागि कुदेको कुद्यै गर्ने कुरा पनि भएन । तर पनि सम्बन्धित व्यक्तिले नै घर बहाल कर तिर्नेपर्ने कुरामा अडिग भएँ । तत्काल घर मालिकलाई फोन पनि गरियो । जवाफ… । मेरो कुरा नसकिँदै मैले गरेको फोन उतैबाट काटियो । खेल खत्तम ।
अब मैले कर्मचारीसँग यो त अन्याय भयो । तपाईंहरु घर बहालमा बस्नेलाई नै यसरी किन कस्नु हुन्छ ? अनुगमन गर्नुहोस् । नियमन गर्नुहोस् । कर पनि धेरै उठ्छ भन्दा मेरो वाक्यहरुले हावामा काँवा खाँदै थिए । उपाय नास्ती भएपछि वार्षिक २० हजारको कागत बनाएँ र दुई हजार कर तिरेर सञ्चारमाध्यम सूचीकरणको काम तिर लागेँ । निमुखाहरुको आवाज भनिइने सञ्चारमाध्यम पनि त्यहाँ निमुखा सावित भयो । सोचिरहेँ म लाचार कि मेरो सरकार ?…
बिर्तामोडको मुख्य बजार क्षेत्रमा यति धेरै घर छन् जहाँबाट बिर्तामोड नगरपालिकाले वर्षको कम्तीमा पनि २०–२५ करोड रुपैयाँ बहाल कर उठाउन सक्छ । जसले नगरको विकासमा ठूलो योगदान गर्न सक्छ । तर, अघिल्लो वर्ष जम्माजम्मी डेढ करोड बढी घर बहाल कर उठेको अपुष्ट कुरा सुनेको छु ।
स्थानीय सरकार भएपछि नागरिकको नगरप्रति धेरै आशा भरोसा छ । धेरै विकास निर्माणको अपेक्षा नागरिकले गरेका छन् । तर ती अपेक्षाहरु भनेको पैसा बिना हुन सक्दैन । जनताबाट उठेको करबाटै नगरले पनि आफ्नो विकास गतिविधि अघि बढाउने हो ।
घरधनीहरुले वर्षमा लाखौँ रुपैयाँ घर भाडा उठाइरहेका छन् । आखिर कर तिर्नुपर्ने पनि आम्दानीबाटै हो । तर पनि किन भाडामा बस्नेहरुलाई नै कर तिर्न बाध्य बनाइरहेका छन् । यो त सरासर अन्याय हो ।
मान्छेले जहाँबाट जे प्राप्त गर्छ, उसले त्यो कुरा त्यहीँ समर्पित गर्नुपर्छ । जहाँबाट कमाएको हो त्यहीँ फिर्ता गर्नुपर्छ । पञ्चतत्वले बनेको भौतिक शरीर एक दिन त्यही पञ्चतत्वमा विलिन हुन्छ । संकुचित मानसिकताबाट माथि उठौँ, मानवबाट महामानव बन्ने बाटोमा प्रस्थान गरौँ ।
झापामा सानो माइले बगाएर बेपत्ता बालक मृत फेला
झापामा आज १८ जनामा कोरोना पुष्टि, सबैभन्दा धेरै दमकमा १३ जना